पूर्व मन्त्रीहरुको चाहनाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अल्मल्यायो, नियुक्ती बिना नै खाए बधाई ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Headline Nepal | १६ श्रावण २०७४, सोमबार २१:४५ |
१६ साउन, काठमाण्डौँ । आफु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको डेढ महिना पश्चात मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले केही सहयोगीहरु नियुक्ती गरेका छन् भने अझै केही सहयोगी नियुक्ती गर्न बाँकि देखिन्छ ।
प्रमुख स्वकिय सचिव, दुई जना स्वकिय सचिव, परराष्ट्र सल्लाहकार र प्रेस संयोजक नियुक्ती गरेका देउवाले राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार लगायत नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।
नजिकिदो भारत भ्रमणलाई ध्यानमा राखी अब छिट्टै नै आफ्ना सहयोगीहरुको टिमलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्णता दिने बताईन्छ ।
राजनीतिक सल्लाहकार लगायतका पदमा नियुक्त हुन देउवा निकटस्थ थुप्रै आकांक्षी भएकाले देउवालाई सहयोगी र सल्लाकार नियुक्ती गर्न गाह्रो परेको विश्लेषण छ ।
पार्टीका केन्द्रिय सदस्य, सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्ती खाने चाहना राखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार नियुक्ती गर्न थप जटिलता परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाल राम्रोसँग सञ्चालन भैरहेको बताउने एक थरी छन् भने एक थरीले सहयोगी र सल्लाहकारहरुको टिमलाई प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै पूर्णता दिनुपर्ने बताउँछन् । जे भएता पनि प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालै राजनैतिक सल्लाहकार लगायतका पदमा आफु निकटस्थलाई नियुक्ती गर्ने मुडमा देखिएका स्रोतले बतायो ।
राजनैतिक सल्लाहकारमा कस्को सम्भावना बढि ?
देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै देखि काँग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता विश्व प्रकाश शर्माको नाम राजनैतिक सल्लाहकारको रुपमा चर्चामा रह्यो । शर्माको नाम सामाजिक सञ्जालहरुमा त छ्याप्छ्याप्ती नै आयो । शर्मालाई नजिकका साथीभाई आफन्तले बधाई समेत दिन भ्याए । शर्मा हालसम्म नियुक्तीको प्रतिक्षामा रहेको उनी निकटस्थ स्रोतले बताएको छ ।
शर्माको नाम सँगसँगै केही दिन पश्चात काँग्रेसका अर्का युवा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पनि नाम निकै चर्चामा रहेको छो । पाण्डेको नाम पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै छायो र उनले पनि साथीभाई, आफन्तहरुको बधाई खान भ्याए । उनी पनि हाल नियुक्तिको प्रतिक्षामा रहेको निकटस्थ स्रोतले बताउँछ ।
पाण्डे र शर्मा नियुक्तिको प्रतिक्षामा रहेता पनि काँग्रेसका पूर्व मन्त्रीहरु डा. प्रकाश शरण महत, र रमेश लेखक जस्ता केन्द्रिय स्तरका ‘हेभी वेट’ काँग्रेसी नेताले पनि राजनैतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुन चाहेकाले नियुक्तिमा ढिलाई भएको काँग्रेसीहरुको आम बुझाई छ । राजनैतिक सल्लाहकारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले र कसलाई नियुक्त गर्लान् ? त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ ।
हालसम्म को-को नियुक्त भए ?
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफु प्रधानमन्त्री भएको केही दिन पश्चात परराष्ट्र सल्लाहकारको रुपमा डा. दिनेश भट्टराई र प्रेस संयोजकको रुपमा गोविन्द परियारलाई नियुक्त गरे । भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोईरालाका परराष्ट्र सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए ।
परियारको प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकको रुपमा यो नियुक्ति नै पहिलो हो । परियारले भन्ने गरेका छन्, ‘मेरो यो पहिलो अवसरलाई मेहनतका साथ न्याय गर्नेछु’ । तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति हुने चर्चा हालका नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, अनुभवी पत्रकारहरु किशोर नेपाल, सुरेश आचार्य, पर्शु घिमिरे र वसन्त प्रकाश उपाध्यायको पनि नाम चर्चामा थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले हालसम्म प्रेस सल्लाहकारका रुपमा कसैलाई पनि नियुक्त गरेका छैनन् । सिग्देललाई प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ती हुने/नहुने दुवै खाले प्रतिक्रियाहरु प्रेस युनियन र सिंहदरबारभित्र चल्ने गरेको छ ।
परराष्ट्र सल्लाहकार र प्रेस संयोजक नियुक्ति गरेका देउवाले त्यसको केही हप्तापछि स्वकिय सचिवको रुपमा केशव जोशीलाई नियुक्ती गरे भने त्यस पश्चात प्रमुख स्वकिय सचिवको रुपमा भानु देउवालाई र स्वकिय सचिवको रुपमा विरेन्द्र थापालाई नियुक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाललाई सहज ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सहयोगी र सल्लाहकारको कत्रो टिम तयार पार्नेछन्, त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ । विश्लेषकहरु भन्ने गर्छन्, ‘देशको कार्यकारी पदका व्यक्तिहरुको कार्यकाल सफल हुनमा सक्षम सल्लाहकार र सहयोगी आवस्यक रहन्छ । ‘
Previousयोजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिए पदबाट राजीनामा
Nextह्वाइट हाउसका कम्युनिकेशन निर्देशक एन्टोनी स्कारामुर्ची बर्खास्त
चिनियाँ सत्तामा शी जिन फिङको पकड अझ मजबुत !
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०८:३४
फुटबल : नेपाल भर्सेस भारत (लाइभ)
२३ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १९:५३